Ndụmọdụ na-ekpo ọkụ iji mepụta vidiyo na-agba ume karịa YouTube na-echekwa - SoNuker
Ndụmọdụ na-ekpo ọkụ iji mepụta vidiyo na-agba ume karịa YouTube na-echekwa
N'ime ụwa nke imepụta ọdịnaya vidiyo, enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti ịdọta uche nke ndị na-ege ntị na ijide uche ha. Ka ị nweta ọtụtụ nlele na nchekwa na vidiyo gị, ịkwesịrị ịmepụta ọdịnaya na-adọrọ adọrọ nke na-eme ka ndị na-ekiri ha nwee mmasị ogologo oge. Ebumnuche bụ imepụta vidiyo na-agba ndị na-ekiri gị ume ka gị na ha na-akpakọrịta.
Isi ihe ndị na-esonụ ga-eduzi gị site na usoro ịmepụta atụmatụ maka ịmepụta ọdịnaya nke ga-eme ka ị nweta echiche YouTube na ichekwa.
1. Gbalịa chọpụta masịrị ndị na-ege gị ntị
Ị nwere ike ịnwe echiche mara mma maka ọdịnaya maka ọwa gị. Agbanyeghị, ị gaghị enweta echiche ma chekwaa maka ọdịnaya vidiyo gị ruo mgbe ị ga-ekpebi ihe ndị na-ege gị ntị chọrọ ịhụ. Nke mbụ, ịkwesịrị ịchọ ihe ịrịba ama nke ntinye aka, nke enwere ike ịhụ n'ụdị nkọwa, mmasị, ọnụ ọgụgụ ndị na-ege ntị na ndị debanyere aha ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị hụ nke ọma nke ndị a, ọ pụtara na ndị na-ekiri nwere ike ịchekwa vidiyo na ọwa gị maka ntụle aka n'ọdịnihu.
Ị nwere ike ikpebi mmasị ndị na-ekiri gị site na ịmepụta kaadị ntuli aka n'ime vidiyo ma ọ bụ na ngalaba nkọwa. Ụzọ ọzọ dị mma bụ ịhụ ihe ndị na-ege ntị na ọwa onye asọmpi gị kwuru. Ozugbo ịchọtara ihe dị n'uche ndị na-ekiri gị, ị ga-enwe ike ịmegharị ọdịnaya gị ka ọ dabara na mkpa ha.
2. Mepụta ndepụta ọkpụkpọ YouTube
Otu n'ime ụzọ kacha mma ị ga-esi nweta ọtụtụ nlele YouTube maka ọwa gị bụ site na ịmepụta ndepụta ọkpụkpọ. E wezụga ịhazi vidiyo gị nke ọma, listi ọkpụkpọ YouTube na-enyekwara ndị na-ekiri gị ohere ịkpọ vidiyo gị na akaghị n'ihi njirimara dị na listi ọkpụkpọ ndị a. Mgbe ndị na-ekiri gị na-ekiri ya na loop, na oge nche n'ihi na ọwa gị ga-arịgo na-akpaghị aka. Ndị na-ekiri ahụ ga-enwekwa nhọrọ nke ịchekwa ndepụta ọkpụkpọ niile maka ntụnye aka n'ọdịnihu.
Uru kachasị ukwuu nke ịmepụta listi ọkpụkpọ bụ na ọ ga-enye ndị mmadụ ohere ikiri ọtụtụ vidiyo gị n'otu oge. Ọ ga-agbanyekwa ọwa gị na listi nkwado, nke ga-enye gị ohere ịnweta nlele na ndị debanyere aha. Ọ dị mkpa ịmepụta listi ọkpụkpọ ahụ n'ụzọ dabara adaba ka vidiyo ndị metụtara ma ọ bụ jikọtara ibe ha na-esonye n'otu ndetu egwu egwu. Ọ bụrụ na ị tụba ọdịnaya enweghị njikọ na listi ọkpụkpọ, ị nwere ike mebie ndị na-ekiri gị ngwa ngwa.
3. Nye ndị na-ege gị ntị ihe mere ha ga-eji nọrọ
Ọtụtụ ndị mmadụ, ná nkezi, na-eji ihe karịrị otu awa kwa ụbọchị na-ekiri ihe dị n'ime vidio n'ịntanetị. Yabụ na ọ bara uru ikpebi ka ị ga-esi mee ka ndị mmadụ nọrọ na ọwa gị ogologo oge wee chekwaa vidiyo na ọwa gị n'ọbá akwụkwọ ha. I kwesịrị ịgbalị ịgwa ndị na-ege ntị uru ha ga-erite na ikiri vidio ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na vidiyo gị bụ gbasara ọzụzụ nkịta, ị kwesịrị ịgbalị ịgwa ndị na-ege ntị banyere uru ọzụzụ nkịta dị. Nkọwa kwesịrị ịdị na-adọrọ adọrọ nke ukwuu ka ndị na-ekiri ha laghachi azụ na ya maka ntụnye aka.
Mgbe ị na-ewetara ndị na-ege ntị vidiyo nkuzi, ọ dị mkpa iwepụta ọdịnaya n'ụzọ dị nkenke. Nke a bụ ya mere ịkwesịrị ịhazi ọdịnaya gị tupu oge eruo. Mepụta script vidiyo ka ị ruo n'ókè ahụ ọsọ ọsọ ka e wee na-edobe mmasị nke ndị na-ege gị ntị.
Ebumnuche bụ isi nke imepụta atụmatụ okike ọdịnaya maka YouTube bụ iwulite ntọala ndị debanyere aha siri ike. Ọ bụrụ na ị nwere ọnụ ọgụgụ dị mma nke ndị debanyere aha YouTube, ị ga-enwetakwu echiche na ọdịnaya gị n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na ị na-achọ inweta ndị debanyere aha YouTuber efu, mgbe ahụ Sonuker.com bụ ebe ịnọ. Anyị na-enye ọtụtụ ọrụ YouTube iji nyere aka na uto ọwa gị. Yabụ kpọtụrụ anyị taa ka ịmatakwu!
Ndụmọdụ na-ekpo ọkụ iji mepụta vidiyo na-agba ume karịa YouTube na-echekwa nke ndi dere SoNuker, 19 November 2021
6 Ihe kpatara YouTube jiri bụrụ obere ọrụ
YouTube ekwesighi iwebata. Onye ọ bụla maara na ọ bụ ikpo okwu ịkekọrịta vidiyo, mana n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ toro nke ukwuu karịa nke ahụ. Ọ ghọọ irè ahịa n'elu ikpo okwu na ya, na ọtụtụ ulo oru…
Mee ụdị vidiyo ndị a na YouTube ka ị bụrụ ndị a ma ama
Ihe karịrị ọdịnaya 500 nke ọdịnaya ka a na-ebugo na YouTube na nkeji ọ bụla na ikpo okwu toro ka ọ bụrụ injinị 2nd kachasị na Google. Na ọtụtụ mpi n'elu ikpo okwu, ọ bụ…
Ngalaba mgbasa ozi na-elekọta mmadụ nwere ọtụtụ ndị egwuregwu - Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, na ọbụna Reddit ịkpọ aha ole na ole. N'ụzọ megidere nke ahụ, otu ikpo okwu na-aga n'ihu na-achịkwa nnabata vidiyo: YouTube. N'ihe karịrị…